အပျိုစင်ဘ၀ကို လေလံတင်ရောင်းချခဲ့သည့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် Aleexandra Kefren | Buzzy
အပျိုစင်ဘ၀ကို လေလံတင်ရောင်းချခဲ့သည့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် Aleexandra Kefren
ဟောင်ကောင်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးမှ ပေါင် ၂ သန်း ပေး.....
Aleexandra Kefren ကို အမည်မဖော်လိုတဲ့ ဟောင်ကောင်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးမှ ပေါင် ၂သန်းဖြင့် ၀ယ်ယူသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာ နာမည်ကြီးလေလံ ၀က်ဆိုဒ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Cinderella Escorts မှာ သူမရဲ. အပျိုစင်ဘ၀ကို လေလံပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝက်ဆိုဒ်ရဲ. ပြောကြားချက်အရ သူမနှင့်အတူ လေလံတင်သူ အယောက်၃၀၀ ခန့်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Aleexandra Kefren ကို အမညျမဖျောလိုတဲ့ ဟောငျကောငျလုပျငနျးရှငျတဈဦးမှ ပေါငျ ၂သနျးဖွငျ့ ဝယျယူသှားခွငျးဖွဈပါတယျ။သူမဟာ နာမညျကွီးလလေံ ဝကျဆိုဒျတဈခုဖွဈတဲ့ Cinderella Escorts မှာ သူမရဲ. အပြိုစငျဘဝကို လလေံပဈခဲ့တာဖွဈပါတယျ။အဲ့ဒီဝကျဆိုဒျရဲ. ပွောကွားခကျြအရ သူမနှငျ့အတူ လလေံတငျသူ အယောကျ၃၀၀ ခနျ့ရှိတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
မိမိတို့ ၏ အပျိုစင်ဘ၀ကို လေလံပစ်သူ အများစုမှာ Australia, Europe, Africa, North and South America, arabic Countrys and Asia နိုင်ငံများမှဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Cinderella Escorts ကုမ္ပဏီဟာ လေလံရငွေရဲ. ၂၀% ကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။Aleexandra Kefren ဟာ ယခု လို လေလံတင်သည့် ကိစ္စအတွက် သူမရဲ. မိသားစုနှင့်လည်း အငြင်းပွားစရာပြဿ နာများရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။သူမရဲ ဖြည့်စွက်ပြောကြားချက်ထဲမှာတော့ "အမျိုးသမီး အများစုဟာ သူမကဲ့ သို့ အပျိုစင်ဘ၀ကို လေလံပစ်ဖို့ စိတ်ကူးရှိနေပါတယ်လို့ " ပြောဆိုထားပါတယ်။
မိမိတို့ ၏ အပြိုစငျဘဝကို လလေံပဈသူ အမြားစုမှာ Australia, Europe, Africa, North and South America, arabic Countrys and Asia နိုငျငံမြားမှဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ။ဒါပမေဲ့ Cinderella Escorts ဟာ လလေံရငှရေဲ. ၂၀% ကို ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။Aleexandra Kefren ဟာ ယခု လို လလေံတငျသညျ့ ကိစ်စအတှကျ သူမရဲ. မိသားစုနှငျ့လညျး အငွငျးပှားစရာပွဿ နာမြားရှိခဲ့တယျလို့ ဆိုပါတယျ။သူမရဲ ဖွညျ့စှကျပွောကွားခကျြထဲမှာတော့ အမြိုးသမီး အမြားစုဟာ သူမကဲ့ သို့ အပြိုစငျဘဝကို လလေံပဈဖို့ စိတျကူးရှိနပေါတယျလို့ ဆိုပါတယျ။